Fomba hahazoana fitaovana amin'ny domy hafa miaraka amin'ny fanodinana ny IGP Route
Dingana manaraka ny torolalana mba hahazoana fitaovana amin'ny domy hafa miaraka amin'ny fanodinana ny IGP Route
Indraindray dia ilaina ny mitantana mihoatra ny protocole iray misimisy kokoa ary manana faritry ny fandrindrana mihoatra ny iray: fivarotana samihafa, fifindrafindra manomboka amin'ny protocole iray avy eo manomboka amin'ny olana manaraka, ny fahasamihafana amin'ny solosaina, ny fironana ara-politika na ny tsirairay, ny famoronana ny rafitra fitsapana, ny fikambanana ary ny fananana.
Ny famoahana dia ny fomba handefasana ny data manodina manomboka amin'ny protocole iray mandeha amin'ny lalana ary avy eo amin'ny manaraka ahafahana miditra amin'ny gadget izay miaina amin'ny sehatr'asa maro samihafa. Ny laharam-pampandrosoana tsirairay dia hitondra ny iray amin'ireo tahiry tsara ho any amin'ny tabilao misokatra eo amin'ny sehatra misy azy, saingy mety hisy faniriana na mila fitaovana gadgets amin'ny faritra hafa. Ny fanarenana dia atao amin'ny farafaharatsiny router iray farafaharatsiny eo anelanelan'ny faritra fametrahana loharano na protocole ho efamira iray na protocol.
Ireto misy safidy telo ahafahana miditra tanteraka amin'ny toerana:
Dingana ara-dàlana avy amin'ny famantaran-dàlana. Azonao atao ny mizara dingana lavalava amin'ny alim-by iray izay manohina ny toerana rehetra (fikolorana limiara) mankany amin'ireo router izay mifandray an-tariby ao anatin'ny faritra iray (fifamoivoizana anatiny). Izany dia mety hivezivezy amin'ny lalana tsy fantatra avy any amin'ny faritra izay tsy mahatsiaro ny router ao anatiny ary manana ny router ao anatiny mankany amin'ny famaritana ny limite, izay mety manana latabatra fantsom-piraketana tanteraka satria handray anjara amin'ny faritra rehetra. Io fomba fanao io dia mahomby raha toa ka misy tanjona tokana mifandraiketana amin'ny faritra misy azy.
Fomba fanovàna indray mandeha, miaraka amin'ny alalana. Farafahakeliny, misy router-tetezana iray farafahakeliny dia mandalo ny dingana lavalava mankany amin'ny toerana iray, kanefa manodina any amin'ny faritra hafa. Raha ny mahazatra, ianao dia hisafidy ny solo-kevitra ho an'ny sivana mba hamerenana ny lisitry ny protocols izay ahazoana ny mari-pametavetana azo antoka fa horaisina ho maromaro. Ny famerenana indray mandeha dia ampiasaina mba hampitomboana ny haben'ny lalana maro, ohatra, amin'ny fikambanana iraisam-pirenena. Ny protocole an'ny foibe dia mety ho BGP (Border Gateway Protocol) ary ny protocol (s) dia mety ho IGP (Interface Gateway Protocol, ohatra ny OSPF, EIGRP, RIP na IS-IS, na ny fisehoan-javatra samihafa mitovy amin'ny IGP. miasa tsara amin'ny famerenana sy ny fividianana, satria ny "vaovao" sasantsasany amin'ny fikambanana dia tsy mila mandrindra ny protocol protocole tsy miankina amin'ny hafa, na mila miova amin'ny fotoana.
Fomba ambaratongam-pahefana roa na fizarana dia mizara vitsivitsy na ny ankamaroan'ny angon-drakitra momba ny fifandraisana iray ho an'ny hafa. Izany no safidy sarotra indrindra, indrindra raha betsaka kokoa ny tanjona amin'ny fifandraisana eo amin'ny faritra. Tokony hampiasaina izany raha misy tanjona tokony ho azo tratrarina manomboka amin'ny toerana iray eo amin'ny manaraka. Na izany aza dia tsy maintsy ampifandraisina manokana ny fomba fiasa mba hampisehoana ny fivoaran'ny hetsika ireo tanjona ireo na ny fomba tokony hikarakarana ny hetsika amin'ny alàlan'ny paikady fiarovana. Ny fiahiahiana tsy tapaka amin'ny fizarana roa dia ny fitodihana ny loopia, ny lalana sy ny asymmetrika ary ny fanodinana ambany.
Asmmetric routing dia ny toerana izay mandefa ny mandefa dia tsy mitovy amin'ny lalana tonga. Mety hipoitra ireo olana raha misy tetikady fiarovana manangana ny asa atao, na raha misy rafitra misy firewall efa napetraka. Azo atao koa ny manelingelina ny fandehanana amin'ny asymmetrika. Ireo mpanao fanatanjahan-tena, izay mety hitera-batana ho an'ny gadget manokana amin'ny fahazoana adiresy iraisana, dia manantena ny ho avy sy hiverina ny lalana.
Suboptimal routing dia ny toerana izay lalana ankafiziko indrindra amin'ny solo-nao dia tsy midika velively ny lalana mivantana. Izany dia mitranga rehefa mihetsika ny "limit" momba ny lalana avy amin'ny fanombohan-draharaha ary koa amin'ny alàlan'ny protocole hafa ho lalana ivelany. Noho ny tsy fahafaha-manamarina fa ny fisintonana ny fanaraha-maso ny fandaharan'asa ivelan'ny fandaharam-potoana dia azo hiantehitra kokoa noho ny voalazan'ny protocolla, hianjera amin'ny alàlan'ny fanatanjahantena eo an-toerana ny fanovana. Ny toeram-ponenana dia ny manara-maso ny fisaraham-pahefana an-dalam-pandrosoana. Tsy ny hetsika mivantana indrindra no miova ary tsy mitovy amin'ny dingana mankany amin'ny ambaratonga, eny fa na dia ao anatin'ny fanolotra vokatra avy amin'ny mpivarotra aza.
Loze mitodika, na fehezan-teny iray, dia mety hitranga rehefa averina averina adiresy iray ny angon-drakitra iray amin'ny tanjona iray amin'ny fifandraisana ary aorian'izany dia averina averina ao amin'ny fanombohana indray amin'ny tanjona hafa amin'ny fifandraisana. Amin'ny tanjona voafaritra manokana hametrahana fehezan-dàlana iray, mila manao fampidirana ianao. Ny fandaharana dia handà ny lalana manomboka amin'ny protocol protocola fa tsy hampandrosoana indray ao amin'io protocole io. Mila mamorona ny fantsona ianao. Ohatra, amin'ny tsy fahafahanao manana OSPF sy EIGRP izay misy fifantohana roa farafahakeliny, ianao dia hanangana sehatra iray ho an'ny làlana OSPF rehetra ary hampidira azy ireo amin'ny famerenam-bola avy amin'ny EIGRP ho OSPF. Fandefasana iray hafa no niasa ho an'ny lalana EIGRP rehetra, nanasokajy azy ireo tamin'ny famerenana ny OSPF ho an'ny EIGRP. Ity fisarahana ity dia tsy maintsy atao amin'ny router rehetra eo anelanelan'ireo fifanarahana roa ireo mba ho azo iainana. Afaka mandrindra ny prefixes ianao na afaka mampiasa labels, izay manintona ahy. Azo alaina ho toy ny singa amin'ny fomba hanodinana ny làlana mankany amin'ny protocola tariby ny labels, ka azonao atao ny mikaroka ireo labels mba hampitana izany. Mila manao tetika izay mikaroka aloha ireo labels ianao ary mandà azy ireo ary amin'ny tsy fahafaha-manao izay tsy misy azy ireo, dia manazava ireo làlana hahafantarana ny protocols loharano. Natao ho an'ny fitondrana izany, ka tokony hapetraka ny polisy roa. Ireo protocoles rehetra, ao anatin'izany ny RIPv2, dia afaka manentana labels.
Tokony hanaraka ny fanodinana ny IGP amin'ny Cisco gadgets isika. Rehefa manitsy avy amin'ny protocole ho amin'ny iray hafa, misy zavatra roa tokony hotsaroana:
Ny fomba fanarenana indray dia misintona ny tabilao, fa tsy ny tahiry momba ny protocols. Amin'izay fotoana izay dia hanodina ny RIP amin'ny OSPF ianao, dia mikaroka ireo lalana antsoina hoe RIP ao amin'ny tabilao ny fikarakarana. Misy tranga iray manokana: ny lalana mifandraika amin'izany dia mihazakazaka ny protocol.
Ao amin'ny router Cisco ho an'ny IPv4, ny lalana mifandraika amin'izany dia hivoaka ho azy ihany koa. Izany dia manan-danja ny halavan'ny anao tsy mamerina rehefa ampifandraisina amin'io protocole tarika io, izay hitondra ny singa hijanona.
Ao amin'ny router an'ny Cisco ho an'ny IPv6, dia tsy mamerina manodina ireo lalana mifandraika amin'ilay protocol ny fomba famerenam-pahefana, raha tsy misy ny safidinao mifandraika amin'ilay redirection.
Ny Cisco OS sasany dia mitaky fifanarahana mifandraika amin'ny baiko fanavaozana ho an'ireo lalana izay handefasana amin'ny fanombohan'ny protocols amin'ny manaraka. Rehefa mamerina manolotra ny protocole ianao, dia mila mametraka ny môtika amin'ny làlana mba hahafahan'izy ireo mifototra amin'ny fandaharam-potoana marina momba ny protocols tariby. Ny metriky ho an'ny protocole iray dia tsy mikaroka ny hanatsara ny hafa. Misy metrika masira iray izay tsy maintsy ampifandraisina amin'ireo lalana ivelany mankany amin'ny protocola tariby. Ny latabatra hita ao amin'ny Figure 1 dia mampiseho ny protocola rehetra miaraka amin'ny karazany bitika kely.
Source amin'ny RIP amin'ny EIGRP amin'ny OSPF amin'ny IS-IS amin'ny BGP (MED)
mifandray 1 Metric interface 20 (E2) 0 0
voasakantsakan'ny 1 Metric interface 20 (E2) 0 0
RIP tsy manam-petra 20 (E2) 0 IGP metric
EIGRP tsy manam-petra Fitsaboana hafa metric 20 (E2) 0 IGP metric
OSPF tsy manam-petra tsy manam-petra 0 IGP metric
MAHAVONONA-dia tsy manam-petra tsy manam-petra 20 (E2) IGP metric
BGP tsy manam-petra tsy manam-petra 1 (E2) 0
Sary 1: Variolojia ho an'ny protocol
Noho ny tsy fahafaha-milentika tsy manara-penitra ny taratra metrik dia tsy azo ampiasaina ny fianarana. Mila mametraka ny metric ianao ary mamerina manaparitaka ny baikon'ny loharanom-baovao ho amin'ny tanjona na amin'ny fepetra fanarenana na amin'ny baiko metric voafaritra eo ambanin'ny baiko tarnin'ny taridalana. Ny metric voa dia ao anatin'ny fandaharam-potoana ho an'ity protocoles tariby ity: fitsangatsanganana ho an'ny RIP, vola ho an'ny OSPF sy IS-IS, ary ny metriky mifangaro ho an'ny EIGRP (fahaiza-manao fifindra-monina, faharetana, kalitao tsy miova, enta-mavesatra ary ny MTU).
Ny hevitra iray farany-raha ny BGP no loharanom-baovao, dia ny sasin-tserasera BGP ihany no haverina any amin'ny IGP. Izany dia rafitra mihetsika mifanohitra amin'ny loop. Raha toa ka tsy maintsy manitsy ny lalan'ny BGP ao anatiny ianao, dia araho amin'ny fomba fiasa BGP (fa tsy protocol protocolaire) bgp redistribute-internal command.
Amin'ireny andalana ireny, raha toa ianao ka mihazakazaka mihoatra ny fampivoarana fitiliana iray ary mila fangatahana feno na tsy feno ianao, dia mila averina averina averina alaina eo amin'ireo protocols ireo. Misy zavatra roa tokony hodinihina sy miomana alohan'ny hanombohanao manomana. Ny famoahana dia mety ho fototra manokana (iray amin'ireo protocoles, tanjona iray ifantohana) ary mety ho tsy azo antoka loatra.
Ampidiro amin'ny asa fanofanana CISCO Prime Infrastructure ny asa ataonao
Ahoana ny fampiharana ny programan'ny Network amin'ny Cisco Devices